နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မစ္စတာ ငုယင်ဖူးကျောင့် ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော် သမ္မတအိမ်တော် သံတမန်ဆောင်ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် အာဆီယံဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် မြန်မာ – ဗီယက်နမ် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ ဦးသန့်စင်မောင်နှင့် ဦးကျော်ဝင်း၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးမင်းသူ ၊ အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဦးကျော်ဇေယျ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်စိုးဝင်း နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပြီး ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Luan Thuy Duong လည်း တက်ရောက်သည်။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ဗီယကျနမျဆိုရှယျလဈသမ်မတနိုငျငံ ကှနျမွူနဈပါတီဗဟိုကျောမတီ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဦးဆောငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျ အဖှဲ့အား လကျခံတှဆေုံ့
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ ဗီယကျနမျဆိုရှယျလဈ သမ်မတနိုငျငံ ကှနျမွူနဈပါတီ ဗဟိုကျောမတီ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး မစ်စတာ ငုယငျဖူးကြောငျ့ ဦးဆောငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ယနေ့ နံနကျ ၉ နာရီ ၁၅ မိနဈတှငျ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံတျောသမ်မတအိမျတျော သံတမနျဆောငျဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံ တှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့စဉျ အာဆီယံဒသေတှငျး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားနှငျ့ မွနျမာ – ဗီယကျနမျ နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားကို ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့အတူ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးကြျောတငျ့ဆှေ၊ ဦးသနျ့စငျမောငျနှငျ့ ဦးကြျောဝငျး၊ ဒုတိယ၀နျကွီး ဦးမငျးသူ ၊ အမွဲတမျး အတှငျးဝနျ ဦးကြျောဇယြေ၊ ဗီယကျနမျနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာနျိုငျငံသံအမတျကွီး ဦးကြျောစိုးဝငျး နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွပွီး ဗီယကျနမျဆိုရှယျလဈသမ်မတနိုငျငံ ကှနျမွူနဈပါတီ ဗဟိုကျောမတီ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဦးဆောငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့နှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဗီယကျနမျဆိုရှယျလဈသမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Dr. Luan Thuy Duong လညျး တကျရောကျသညျ။